Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။
ပုံစံ - SV-DT Series
Poly-Bag Making Machine ကိုဆွဲပါ။(စာရွက်အမျိုးအစား)
ဆွဲသည်။-တိပ်ဖြတ်စက်ကို ဆွဲခြင်းနှင့်အတူ အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။-တိပ်အိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်နှင့် ရီယဲလ်ပြောင်းလဲမှုစက်ဝန်းကို လျှော့ချပေးသည်။,အသုံးပြုချိန်ကို နှစ်ဆတိုးစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးစေသည်။.
unwinder နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော EPC စက်ပစ္စည်းသည် လွယ်ကူပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အထိခိုက်မခံဘဲ တည်ငြိမ်သည်။.
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဖြည်စက်,အရှိန်ကို အလိုအလျောက် လျှော့ပါ။-ညှိ. (ရွေးချယ်ခွင့်)
တြိဂံခေါက်ကိရိယာ,အလွှာတစ်ခုတည်းကို ဖလင်နှစ်ထပ်ဖြစ်အောင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ခေါက်ပါ။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဆင်နေရာအား ချွေတာရန်အတွက် ထပ်နေသော EPC နှင့် တြိဂံခေါက်ကိရိယာကို ရွေးချယ်မှု.
Standard equipments များသည် double lip folding device များဖြစ်သည်။,အောက်ခြေ gusset ကိရိယာနှင့် ဘေးဘက်အဖွင့်ကိရိယာ. (အဖွင့်)
အထူး rotary တံဆိပ်ဓားဒီဇိုင်းသည် တံဆိပ်ဓားကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် ဘေးကင်းစေသည်။,အဆင်ပြေတယ်။,မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။.
အထူး pneumatic တံခါးနှင့်စာနယ်ဇင်း roller ကိရိယာ,ပင်မစက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း,ဆောင် ရွက်နိုင်သည်။-ပိတ်ဆို့ထားသော ကုန်ချောကို ကျွေးပါ။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
ရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်းများ:ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ကော်ကိရိယာ,ပုလဲထည့်သွင်းကိရိယာ,punching ယူနစ်,double sealing device နှင့် block out လုပ်ပါ။-အစာကျွေးကိရိယာ.
မော်ဒယ် အိတ်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်
(အိတ်များ/မိ) ရုပ်ရှင်အထူ(မီလီမီတာ) ပါဝါလိုအပ်သည်။ စက်အရွယ်အစား
အကျယ် အရှည် ထိပ်ခေါက် အောက်ခြေမှန်းဆချက်
Poly-ဆွဲအိတ် ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ် Poly-ဆွဲအိတ် ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ် တိပ်ဆွဲပါ။ ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ်
SV-1000-DT 100~700 100~860 100~950 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ 20~100 20~160 HDPE
၀ယ်တယ်။.05~0.12 6.2KW 8.၃၃x၁.၇၅x၂.0
SV-1200-DT 100~850 100~1050 100~1150 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ 20~100 20~150 HDPE
၀ယ်တယ်။.05~0.12 6.7KW 9.00x1.၉၅x၂.0
SV-1500-DT 100~1150 100~1300 100~1440 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ 20~100 20~135 HDPE
၀ယ်တယ်။.05~0.12 9.2KW 9.90x2.၂၅x၂.0
ထိပ်တန်း-Seal Device ကိုခေါက်ပါ။
Auto Unwinder ဖြင့် EPC
※သတ်မှတ်ချက်များသည် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/draw-tap-bag-machine.html
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်မှကျေးဇူးတင်စကား, ငါတို့၏ Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။ ထုတ်ကုန်အတွက်ဖောက်သည်တွေနဲ့လူကြိုက်များ Taiwan။ လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကျနော်တို့ ISO9001 အောင်လက်မှတ်မှီများနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့အမည်အနိုင်ရထားပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုအကြောင်းပိုမိုကျေးဇူးပြုပြီးသင်ယူဖို့ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကတည်ထောင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုပါ။
Bubble Bag စက်
အကောင်းဆုံး Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Tap Bag စက်ကိုဆွဲပါ။ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ